E-News Nepali || Fast and Accuracy » पोखरामा सोनिकासँग पूर्वयुवराज पारसको मस्ती
पोखरामा सोनिकासँग पूर्वयुवराज पारसको मस्ती
पूर्व युवराज पारस शाह पछिल्लो समय चर्चासँगै आलोचित बनिरहेका छन् । युट्युबर सोनिका रोकायासँगको हिचमिचका कारण पारस चर्चासँगै आलोचित बनेका हुन् । हालै पारस र सोनिकाले पोखरामा मस्ती गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । युटुबर सोनिकाले पारससँग पोखरामा गरेको रमाइलोलाई युट्युबमार्फत् सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
भिडियोकै क्रममा पारसले चुरोट निकालेर सल्काउँछन् । सोनिकाले सार्वजनिक हुने भिडियोमा त्यसो नगर्न आग्रह गर्छिन । पछि पारसले आफु जस्तो छु त्यस्तै देखिन चाहेको बताएपछि सोनिकाले पनि सहमति जनाउँछिन् । उनले भन्छिन् तपाई जस्तो हुनुहुन्छ हामी त्यस्तै स्वीकार गर्छौं । तर पारसले त्यसमा असहमति जनाएपछि सोनिकाले फेरि भन्छिन् तपाईले मलाई स्वीकार गर्नुभएको छ ।
सोनिकाले पारसका बारेमा आउने गरेका समाचारका बारेमा प्रश्न गर्छिन । तपाई यस्तो राम्रो हुुनुहुन्छ तर न्युजमा पनि किन के के आउँछ ? त्यसो भन्दा पारसले पूरा जवाफ दिन्नन् उनी भन्छन्– न्युजमा त के के ….। सोनिकाले तपाईको जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले आफ्नो लागि देश, परिवार र संस्कार नै आफ्नो जीवनमा महत्व राख्ने पारस बताउँछन् । हाम्रो संस्कारमा परिवार नै भगवान हो उनले भन्छन् ।
प्रकाशित मिति २४ मंसिर २०७६, मंगलवार ०३:०८